Feo avy ao Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2019 3:17 GMT
Zimbaboe: Satria tapitra ny fifidianana ary eo ambany vahohony ny firenena, namoaka ny paikadin'izy ireo vaovao ny antokon'ny fitondrana ZANU-PF mba hampanginana ny ady eo amin'ny olom-pireneny. Nalaina an-keriny tao amin'ny Seranam-piaramanidina Joshua Nkomo ao Bulawayo tamin'ny herinandro lasa ny pasipaoron'i Trevor Ncube, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny gazety tsy miankina roa ao Zimbaboe, The Independent sy The Standard, sy ireo gazety malaza Afrikana Tatsimo tahaka ny Mail sy Guardian. Manombatombana ny tati-baovao fa nametraka lisitra misy ireo mpitsikera sy mpanohitra miisa 64 ny governemanta, izay tsy maintsy alaina avy hatrany ny pasipaoron'izy ireo rehefa hitan'ny manampahefana misahana ny sisintany. Nilaza kosa ireo mpikatroka ny zon'olombelona sy ny mpitarika amin'ny fiarovana ny zon'ny sivily fa mbola tokony ho ankatoavin'ny parlemanta manao lalàna ny fepetra manokana voalazan'ny lalàm-panorenana izay manome alalana ny governemanta hampiato ny fivezivezena ho an'ny olom-pirenena izay ” mety mampidi-doza amin'ny fiarovam-pirenena” ny fivezivezen'izy ireo.
Mandritra izany, Manohy ny Kongresim-bahoakany ao Esigodhini, tanàna kely any Matabeleland ny ZANU-PF, ary tsy nahavita nanetsika fanohanana teny ifotony na dia kely aza. This is Zimbabwe manamarika fa tsy mahazatra ho an'ny vahoakan'i Buluwayo ny mahita andiam-piara mitanjozotra an'ny filoham-pirenena mandehandeha eny amin'ny araben'ny tanàna faharoa ao amin'ny firenena.
“Tsy zatra fotsiny ny fiara mitanjozotra ny vahoakan'i Bulawayo.
Teny an-dalana hody androany alina, voatery nivily lalana tsy nahazo nandeha ny lalambe ireo namana ary nandray ny lalana zotram-piara tokana. Nahafinaritra ny andron'i rgm tao amin'ny kongresiny zanu tao Esigodini ary teny an-dalana hody ny andian'olona.”
Burundi: Tezitra tao amin'ny biraon'ny Firenena Mikambana ao Burundi noho ny tsy filazana momba ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona i Agathon Rwasa, kanefa mpitarika ny FNL maromaro no hita nanao fitafin'ny Firenena Mikambana tamin'ny volana lasa teo.
RDC: Sahara Sara mitatitra momba ny horohorontany tany atsinanan'i Congo izay zara raha notantarain'ny MSM .
Adventures of a Retired Armchair Traveler mandinika ny heloky ny olom-pirenena RDC voampanga ao Aostralia noho ny fampielezana ny VIH, ka mahatonga izany fahasamihafana lehibe izany,
“Ao amin'ity tantara ity, dia tsy ampy ny vaovao hahafantarana raha nanao fanahy iniana ilay lehilahy nogadraina. Tsy mitovy ny hoe mahafantatra. Ny mahafantatra dia midika fa nahazo fizahana miabo izy ary avy eo nanao firaisana ara-nofo tsy voaaro tamin'ireo vehivavy roa voalaza ao amin'ny lahatsoratra. Ny fanahy iniana dia ny nataon'ilay olona tamin'ny famindrana ny otrikaretina tamin'ireo nanaovana firaisana ara-nofo, izay mamitaka sy mampatahotra kokoa.
Malawi: Mike avy ao amin'ny Hacktivate mitatitra ny fihaonana voalohan'ny bilaogera ao Malawi.